Sidee guul looga gaaraa nolosha Sweden? | Somaliska
Markii qof Sweden ku cusubyahay waxa uu ku fikirayaa sida uu shaqo ku heli lahaa oo uu isku quudin lahaa balse marka aad la kulanto qeybaha kala duwan ee Kamuunada, Laanta Shaqaaleynta iyo Iskuulka waxa ugu muhiimsan ee ay markasta kuugu celcelinayaan ayaa ah in aad luuqada barato, SFI aad dhameyso, baraktik aad soo marto. Wadadaas ayay u arkaan in ay tahay wadada guusha looga kaaro Sweden? Hadaba ma jirtaa wado kale oo wadankaan guul looga gaari karo? Wargeyska Dagens Nyheter ayaa soo qaatay qisada labo nin oo Ciraaqiyiin ah oo labo wada oo kala duwan u qaaday sidii ay guul uga gaari lahaayeen nolosha Sweden. Ninka lagu magacaabo Cali 4 sano ka hor ayuu Sweden yimid. Waqti kuma uusan lumin in uu SFI dhigto ee isla waqtigaas ayuu bilaabay in uu shaqeeyo , 16 saac ayuu shaqeynayay maalintii. Hada Cali waxa uu furtay dukaan duleedka magaalada Stockholm isagoo reerkiisa halkaas la degay. Ninka lagu magacaabo Taha sidoo kale 4 sano ka hor ayuu yimid Sweden waxa uu raacay wadada ay Swedishku ku taliyaan oo waxaa uu galay SFI, waxa uu soo maray baraaktiik isagoo soo dhameeyay iskuul xirfadeed oo ku taqasusay tima jarka. Balse Taha wali shaqo ma haayo. "Ceyr waa jirta, balse shaqo ayaan u baahanahay" ayuu yiri. Qisadaas waa wadada ay qaadeen labo nin oo isku mar wadanka yimid, xaasaskooda oo iyaguna isla waqtigaas yimid ayaa ka sii fog, labaduba waa guri joog oo shaqo ma haayaan. Luuqadana iskaba daa warkeeda. Waxaa lagu qiyaasaa in raga soo galootiga ah ay ku qaadato in ay Sweden shaqo ka helaan isku celcelis 5 sano, halka dumarkana ay ku qaadato 10 sano. Soomaalida ayaa la dhihi karaa way ka sii liitaan marka loo barbar dhigo dadka carabta ka yimaada oo iyagu aqoon hore iyo waayo aragnimo leh, taasoo u sahasha in ay ganacsi furtaan ama ay shaqo helaan balse Soomaalida oo lagu yaqiin firfircoonaan ganacsi ayaan Sweden aayad ku hayn. Taas waxaa sabab looga dhigi karaa caqabadaha badan ee horyaala oo ay ugu weyntahay luuqada iyo sharciyada qalafsan ee dalkaan. Habada wadadee ayaad ku socotaa oo isleedahay guul ayaad kaga gaareysaa Sweden. Haddii aad aaminsantahay in aad guul ka gaartay nolosha Sweden bal nagu biiri wadada aad martay. Doodu waa furantay.
Markii qof Sweden ku cusubyahay waxa uu ku fikirayaa sida uu shaqo ku heli lahaa oo uu isku quudin lahaa balse marka aad la kulanto qeybaha kala duwan ee Kamuunada, Laanta Shaqaaleynta iyo Iskuulka waxa ugu muhiimsan ee ay markasta kuugu celcelinayaan ayaa ah in aad luuqada barato, SFI aad dhameyso, baraktik aad soo marto. Wadadaas ayay u arkaan in ay tahay wadada guusha looga kaaro Sweden? Hadaba ma jirtaa wado kale oo wadankaan guul looga gaari karo?
Wargeyska Dagens Nyheter ayaa soo qaatay qisada labo nin oo Ciraaqiyiin ah oo labo wada oo kala duwan u qaaday sidii ay guul uga gaari lahaayeen nolosha Sweden.
Ninka lagu magacaabo Cali 4 sano ka hor ayuu Sweden yimid. Waqti kuma uusan lumin in uu SFI dhigto ee isla waqtigaas ayuu bilaabay in uu shaqeeyo , 16 saac ayuu shaqeynayay maalintii. Hada Cali waxa uu furtay dukaan duleedka magaalada Stockholm isagoo reerkiisa halkaas la degay.
Ninka lagu magacaabo Taha sidoo kale 4 sano ka hor ayuu yimid Sweden waxa uu raacay wadada ay Swedishku ku taliyaan oo waxaa uu galay SFI, waxa uu soo maray baraaktiik isagoo soo dhameeyay iskuul xirfadeed oo ku taqasusay tima jarka. Balse Taha wali shaqo ma haayo. “Ceyr waa jirta, balse shaqo ayaan u baahanahay” ayuu yiri.
Qisadaas waa wadada ay qaadeen labo nin oo isku mar wadanka yimid, xaasaskooda oo iyaguna isla waqtigaas yimid ayaa ka sii fog, labaduba waa guri joog oo shaqo ma haayaan. Luuqadana iskaba daa warkeeda. Waxaa lagu qiyaasaa in raga soo galootiga ah ay ku qaadato in ay Sweden shaqo ka helaan isku celcelis 5 sano, halka dumarkana ay ku qaadato 10 sano.
Soomaalida ayaa la dhihi karaa way ka sii liitaan marka loo barbar dhigo dadka carabta ka yimaada oo iyagu aqoon hore iyo waayo aragnimo leh, taasoo u sahasha in ay ganacsi furtaan ama ay shaqo helaan balse Soomaalida oo lagu yaqiin firfircoonaan ganacsi ayaan Sweden aayad ku hayn. Taas waxaa sabab looga dhigi karaa caqabadaha badan ee horyaala oo ay ugu weyntahay luuqada iyo sharciyada qalafsan ee dalkaan.
Habada wadadee ayaad ku socotaa oo isleedahay guul ayaad kaga gaareysaa Sweden. Haddii aad aaminsantahay in aad guul ka gaartay nolosha Sweden bal nagu biiri wadada aad martay. Doodu waa furantay.
Asc Wr Wb dhammaan inta jecel horumarka wanaagsan iyo ka xoroobida Ceyrta aadbaan u guubaabinaa .
Runtii waxaan filaa inteena wadanka ku cusub ama intii naga soo horeeyday iskuaragti baan ka nahay dhanka horumarka wadanka maadaama wadanka yahay wadan mashruucaadkiisa badanya dhanka xeerarka .
Ka shaqsi ahaan aniga wadanka waxaan joogaa 3 sano Allaylahe SFI-ga 8 bilood ayuu igu qaatay qaybta kale ee ka sarayda ee Iv-bass-ka ama SAAS-ka la yiraana ee Svenska Matte iyo Engelskana isku celcelis 1 sano iyo 8 bilood . Markii aan dhameeyayna waxaan rabay in aan Dugsi sare bilaabo balse aniguu arimo dhawra eexinaa ayaan dib u dhigtay oo waxaan bilaabay Kurs-siminaar 1 sano soconaa oo Ganacsi ah 2 beri cashir ganacsiga ku saabsan ayaan qaataa 3 berina Hawlgacmeed ( Praktik ) ayaan sameeyaa . Sababta aan Kurs-kaan ugu eexdayna waxaa waaye in haddii aan dhameeyo oo Godkänd ku dhameeyo aan ku helaa 750 poäng = dhibcood oo Jaamacada iga caawinaa iyo Shahaado cadaynee in aan ganacsiga wax iiga bilaabanyihiin oo aan hela Sverige wax shaqo uga raadsan karo Dukaanka aan Praktika ku samaynaana waa dukaan aad loo ixtiraamo haddii aad 1 sano paraktik ku soo samaydana aad fursado fiican helee Alle idinkiis . Maqsadkaygu maahan in aan waxbarashadii joojiyay balse si aan 3 berina u shaqaysto 3 berina wax u barto ayaan hawshaan u galay . Mahadsanidiin dhamaantiin Walaalaygana waxaan leeyaa ( Ha Falköga ) waa maah maah swedhidh ah Falk waa gorgorka ama galayrka sida aad ogtihiina waa xayawaan meel dheer wax ka arka oo indhihiisa waa indho meel dheer wax ka arka marka si waxan ugu eega hortiina iyo waxa idinku heeraarsan iyo fursadaha wadanka hana la dadaalo Somalaay Cunsuriyiinto inageey nagu halqabsadaan inkastoo meelo badana ku amaanana balse dhanka suuqa kama muuqano . Mahadsanidiin markale iyo markale
April 26, 2011 at 13:28
Dhamaan Dh-yarada soo booqato somaliska.
horta wadanka marki aad ku cusubtahay waxyaaba badan ayaa kaa hor imaa karo oo lid ku ah nolosha
hadaan hadalki Cali.Daha sii daba galo oo maqalka ku xusnaay waxaa macqul ah inaad ku fikirtiin in Cali aw hor mar gaaray halka Daha aw waaga godka kujuro. aniga waxey ila tahay shaqada,hormarka iwm ma,ahin inaad dirbiyada iskugu tuurto ama aad kashaqeeyso waxaan kuu qaadmin oo miisaankaaga qalad ah ku ah i mean diintaada dalkaaga iwm. teeda kale sida maqaalka ku qorneed oo ah in raga 5-sa dumarkana 10 ku qaadato shaqa helista waa qabaa fikirkaas ayadoo sabab loga dhigaayo arima jiro awgood isku soo wada duube wadanka asoon eselba shaqa saas ah leheyn aa hadana culees xaga dhaqdhaqaaqa ah la keenay. Abuuxudeyfa adna nasiib wacan sxb hiigsigaga allaha kuu yeeelo asc
asc bahda somaliska gaar ahaa Jimcaale waad ku mahad santahay sida aad had iyo jeer noola socodsiiso arrimaha somaalida khuseeyaja hadaba walaal jimcaale anigu waxaan qabaa su,aal ka baxsan mowduucan oo ah
waxaan maqlay in qofka swedan sharciga ku leh oo baasaborka weyn aan gaarin uu waddanka sweden ka manaan karo muddo 5 sano ah oo hadhow markuu soo noqdana uusan sharcigiisa uu u shaqeynaayo markaa arrintaa ma la ansaxiyay oo ma runbaa mise weli lama ansixin hadaad war ka hayso walaal iisoo jawaab.
Qorshahaas waxaa soo bandhigay gudi ay dowlada hore ugu saartay in ay soo baaraan arintaan. Wax go’aan ah oo laga gaaray arintaas ma maqal balse haddii ay dhacdo waan soo qori doonaa Insha Allah
asc walalayal jimcaleh iyo walaladay sificaan oo sharatileh baan ini salamaya asc wr wb fikradan qaboh waxa wayeh sacado iyo malimo go aan hala siyo. sida loo siyo sacado go aan bilmatal qamrika,paltalka,zinada,bararka iyo guriga laa iska dexfadhiyo bila micnih iyo wixikaleh lamida ilahay baan ka hosgalneh wana cawdubilah.waxan qaba qof walba oo sharci qaba swidish ilahay u sikhray sharci iyo lacak wajib saraan wayeh lurada dalka xaqisa uu ku leyahay inu siyo.walalayal rasulku wuxu yiri scw qom ama umad luqadisa baratid dhibkisa ka badbadah.fikrada isisen wad mahadsantihin ralih ika noqda af somali hadaan khalday walalayal asc malin ficaan.
waxaan ahay wiil dhalinyar ah oo soomaaliyeed kuna cusub wadanka waxaa aad iisoo jiitay maqaalkan waayo waa mid khuseeya cid walboo jecel GUUL in sweden,
markaa hada maqaalkan waan akhriyey oo waa fiicanyahay laakiin wax cad ama qorshe cad malagu sheegin,
Markaa sorry if didnt understand the true message,
waa arrin fiican in laga fakaro sidii mustaqbil wadankaan looga gaari lahaay, marka aniga kollay waan ku cusubahay wadankaan, balse fikradeyda markaan kadhiibto waxaan qabaa aniga in wax labarto oo xagga aqoonta kor loo qaado dhinac kaste hanoqatee, markaas waxaan hubaa in lagaari doono horumar, balse sida aan aragno dhici meyso in layiraahdo shalay ayaan imid ee aan shaqeeyo, sababtoo ah waad aragteen wadankaan qofka waxa laweydiinaayo waxaa waaye maxaad taqaanaa, khibrad maleedahay, wax kastena waxey leeyihiin aqoon iyo in cilmi loo leeyahay, marka walaalayaal aan ku dadaalno xagga aqoonta in aan heer kagaarno, qofka in uu aqon leeyahay ama khibrad waa wax loo siman yahay wadankaan oo iswidhis iyo ajnabiba laweydiiyo.
aan ku dadaalno aqoonta aana firfircoonaano bulshadana aan kadhex muuqano innaga oo dhaqankeena iyo diinteena heysanno.
Asc sxb maqalka wan ka helay, aniga waxan ahay sxb nin heysta sharciga halsano iyo bar SFI waxa uu igu qatay lixbilood, Grudsklolan 4 bilood, egliska A oo dugsisara ayan kabilabay 4 bilood, ayana dhiganaya wana kudhacay sababta oo ah systemka ay wax u dhigtaan ayanan fahansaneyn laaki teramkii dambe ayan klar gareyaya Sämhallekunskap, Grud och Samhälle A 8 bilood, math 4bilood grud iyo math A, hada wadaa sxb shahadaadii ayey igu qadatay Svenska A och B ayaa ii dhimid. Rajadiina wali iga madhicin asxaabey, arinakana waxan usheega wa dhiri galin in aan laga niyad jabin caqada luuqada waxaan labilbay körkort waa dhaqaji wayaya arima dhaqaalo awged mana kaquusan. marka asb waxan idin kula atalilaba bulsho inta ay melkucusubtaya, dhibato wa kala kulmee, waxaa dhibi lahaa dhaqan hala barta, mecnahedu wa luuqada hala barto iyo dalka systemku uu ushaqeyo, waxan kutalin lahaa asxab inta itraductionka ad kujirtii isku dayay in aad dugsi sare kabaxdiiin, hadii ladadadlo waa lagaraa, caqabadana wa kala kulmee ee sxbyaal afka ha la iskabarto, wax barashadadna wa mida aan dadkaan wax kula aqeybsankarno ee yanlaga quusan, waxbarasho dhibla aan ma kutimaado, waana wada dheer haa ladadadlo, teeda kala axsaabta siyaasadee oo dalka kajirta mabaa di doona hala aqriyo midii ku cajab galiso kamidnoqo, waxaad bixineysa sandkii medlemsavgift oo boqo 100 kr, axsaabta oo laga midnoqdo habka ay wax u socdaan oo lafahmo waxey ka hortageysaa tusaalaba xun oo cunsurigu nagu soo qato, asc haladad asxaab webkisana gala
Masha’Allah ra’yiga walaalka wata magaca ( asc) aadbaan ugu faraxsanahay waana ra’yi saliima aadbaad u mahadsantahay walaal.
Korna waxaan ka salaamaa walaal Awil wata isagan ra’yigiisa waa dhaxal gal maxaa yeelay wadankaan iyo dunidaba dhabarka laguma xamaasho qalinkaase lagu xamaashaa , balse cillada ayaa ah dugsi sare ugu yaraan waa 2 sano ama 3 sano ama ka badan marka intaa waxaan filaa ceyr la qaadan maayo ee waa in wax la shaq shaqdaa si hawlahaaga gaar ahaaneed xor ugu noqotid . Wabillaahi Tawfiiq
asc dhamaantina runti qof waliba wuxuu barto ayaa anfacayo hadi aad maanta ka jifado maliinba oganeysa waxaay tahay waxaana ka si fiican marka ku hadleysid luqado badan oo meelkaasta aad mareysid aad afkaga isku difaceysa ile sida swedan tolka kuma joge hadan ka hadlo somalida qarkod waxbarashada culeys ayaa ka saraan wax yar dhaliinyarta dhameyaay jamacada waxey ka jeceyl yihiin iney shaqeyaan ama ey guriga iska jogan dumarkana wax barashada waxey uu tahay lacagt kaliya yaa laga gosanin ee is dhiib ma oga iney dani ugu jirto ey biri jiid walba is mariin karto ama wadaankeda hadu nabad noqda wax uu tari karto ile somaliya wax kaasta ayaa lo bahan yahay siba taqtarnimo lakiin hada maanta fursadadi ka fa ideysan beri waa kugu adkaneysa allene hanaga dhigo kuwi aduunyo iyo aqiiro tacbado aamiin
asc.horta waxwalba waxa ku xiranyihiin dadaal.lamadhihikaro soomaalida 5sano shaqo kuma hesho waxaan aqaanaa wiil 1sano iyo bar asoo joogo shaqo kuhelay kadib markii afka iswiidhishka bartay 5sano gudahoodna shaqojoogto helay.marka ma aha in carabta naga firfircoontahay ee waxwalba waxa ay ku xirantahay qofka dadaalkiisa.
aad ayay umhadsanyihiin dhamaan asxaabta somaliska
waxay ila tahay in loobaahanyahay in la kala fa,idaysto ama la isdhaafsado fikrado
anigu waan ku cusbahay wadanka kolay waxaa ii qorshaysan in aan xooga saaro dhanka waxbarashada
waxaan ku talinayaa in la barto wax meelkasta oo aad tagto ku anfacaya ileen waan is ognahay waxaan nahay rer guuraay haba meel uhayaamaya
dhamaan waan salamayaa markale ochså jag säger tack så maycket
Marka hore Waxa aan u mahad celinayaa dhamaan inta kaso shaqaysay barnaamjka iyo waxi lamid ah,kadib anigu waddankan waxa aan joga hal sano SFI waxa aan kudhamayay isku celcelin 4-bilood shaqana rajo ayaan kaqaba taas micneheedu ma aha in aan dadka kawanaag sanahay ee lakiin waxa fiican in uu qofwaliba marka horeba isqiimeeyo kadib taarget samaysto wixi intaas dheerna Rabbi u daayo wayo inta aanad falin xisaabta oo kuxisaabtan waxa kuhoryaala iyo waxii aad qabankarto (xarig hadii geed lagu xaquuqo waa uu gooyaa. Dhamaan waad salaaman tihiin markale.
WAXBARASHO AYA DHIGTA FOLKHÖGSKOLAN AYA AAADA ANIGA SHAQA NIYADEEDA MABA KU JIRTA HADI AAN WAXBARTO WAXA AY ILA TAHAY IN AAN NOLOSHA GUUL KA GAARAY
marka hore waan idinsalameykuligiin iyo bahda webka leh marka xiga wadanka waan ku cusubahay waxaan sharci heystaa sanad SFI aan dhigtaa B iyo xisaab luqada masahlana laakiin dadaal ay u baahan tahay dadkayna soomaliyeed dhax galka nagu yar dadka iswedishka ah mala maca milno xaga shaqada wadanka waa leyahay shaqo laakiin ma naqaan waxaan idinkula talin lahaah anigah iyo idinkuba in aan dadaalno aana iska dhaafno in kiraada in ta wax soo baratey aqoonteena hana ladadaalo by
April 28, 2011 at 20:28
Asc. waxan qabaa in ay haboontahay wadada cali maray, walaasheen Muntaas waxa xasuusinayaa in laga hadlayo inta badan soomaalida ee qof iyo 10 midna lagama hadlayo. anaigu wadanka waxan joogaa 4sano, 2bilood ayaan aaday SFI,waxan xiray C , waxan ku xisaabatamayey inaan hore u helo shaqo, waxan qaatay koorso ku saabsan Laxaamada, koosadaasi waxay soconlahay 1sano waxanse kusoo gabagabeeyey 7bilood waxan tegey baratik 1bil ah, nasiib wanaag shaqo ayaan ku helay, waana ku shaqeeyaa, intaan shaqaynayana waxan ku dhexbartay 4 xirfadood oo kale, markaa waxa walalaha soomaaliyeed ku talinlahaa inaan wadadaa raacno,